Arsenal Oo Cashar U Dhigtay West Ham, SAGAAL Daqiiqo Oo Ay Seddex Gool Ku Dhaliyeen & Ljunberg Oo Guushii Ugu Horeysay Gaaray | Somali football world
Home SOOMAALI Arsenal Oo Cashar U Dhigtay West Ham, SAGAAL Daqiiqo Oo Ay Seddex...
Arsenal Oo Cashar U Dhigtay West Ham, SAGAAL Daqiiqo Oo Ay Seddex Gool Ku Dhaliyeen & Ljunberg Oo Guushii Ugu Horeysay Gaaray
Arsenal ayaa guul soo laabasho ah ka gaartay kooxda West Ham oo ay 3-1 ku dardareen ciyaar xiiso laheyd oo ka dhacday garoonka London Stadium iyagoo seddexda gool ku dhaliyay sagaal daqiiqo gudaheed. Tababare Ljunberg ayaana guushiisii ugu horeysay la gaaray kooxda Gunners.
Pepe, Martinelli iyo Aubameyang ayaa Arsenal guusha ku hogaamiyay, waana guushoodii ugu horeysay ee sagaal kulan oo ay bilaa guul ahaayeen tartamada oo dhan.
Tababare Ljunberg ayaa afar bedel ku sameeyay shaxda kulankii ugu danbeysay isagoo ku soo bilaabay Nicolas Pepe iyo Martinelli iyadoo Alexandre Lacazette iyo David Luiz kursiga keydka loo dhaadhiciyay.
Arsenal ay ku rafaaday inay jaanta isla hesho bilowgii ciyaarta iyadoo ay soo wajaheen labo dhaawac mid soo gaaray ka hor inta aysan ciyaarta bilaaban iyo mid soo gaaray markii ay ciyaarta 30 daqiiqo socotay.
Hector Bellerin oo ku soo baxay shaxdii la magacaabay kulankii caawa ayaa ku dhaawacy iskululeynta ay sameynayeen kooxda ka hor inta aysan ciyaarta bilaabanin waxaana bedelay Maitland-Niles iyadoo kursiga keydka uu ku soo biiray Saed Kolasinac.
Nusa saac markii ay socotay ciyaarta waxaa isna dhaawacmay daafaca Keiran Tierney kaasoo dhaawac xun uu garabka ka soo gaaray.
West Ham ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii 38aad markii Angelo Ogbonna uu madaxeeyay kubad karoos uu soo qaaday Forlands iyadoo ay ku sii dhacday Maitland-Niles ka hor inta aysan shabaqa gelin.
Goolkaas oo ay hogaanka ku heysay kooxda West Ham ayaa lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Arsenal ayaa hurdada ka kacday qeybtii labaad ee ciyaarta iyagoo helay goolka barbaraha daqiiqadii 60aad. Lucas Torriera ayaa kubad garabka bidix ugu dhigay Saed Kolasinac kaasoo isna baas karoos ah soo sameeyay waxaana helay Gabriel Martinelli kaasoo shabaqa ku hubsaday.
Waa goolkiisii ugu horeysay ee Premier League waana goolkiisii 8aad ee uu Arsenal u dhaliyo xilli ciyaareedkan, goolkaan ayaana ku yimid darbadii ugu horeysay ee goolka ku bartilmaameedsan ee ay Arsenal hesho.
Lix daqiiqo ka dib Arsenal ayaa soo laabasho fiican sameysay iyagoo hogaanka u qabtay ciyaarta markii uu Nicolas Pepe uu dhaliyay goolkiisii ugu horeysay ee aan rigoore aheyd ee kooxda Arsenal.
Mesut Ozil ayaa ka faa’ideystay khadka dhexe ee West Ham oo muuqbeelay isagoo kubada u dhigay Aubameyang kaasoo durbadiiba kubada u dhiibay Pepe oo isna si sahlan kubada u dhaliyay.
Daqiiqadii 69aad Arsenal waxa ay dhalisay goolkeedii seddexaad waxaana markaan shabaqa u soo taabtay Aubameyang iyadoo kubada uu mar kale ka soo shaqeeyay Ozil waxaana caawiye ka ahaa Pepe.
Ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3-1 oo ay Arsenal ku badisay, waxayna wadada guusha ku soo laabteen sagaal kulan ka dib oo ay bilaa guul ahaayeen tartamada oo dhan.
Arsenal ayaa soo gashay kaalinta 9aad ee kala sareynta iyagoo leh 22 dhibcood, waxay 7 dhibcood ka danbeeyaan kooxda kaalinta afaraad ee Chelsea.
Previous articleManchester United target Erling Haaland opens up on transfer interest amid superb form with RB Salzburg
Next articleTababare Zidane Oo Shaacay Liiska 19ka Xiddig Ee Real Madrid U Ciyaaraya Champions League & Labo Xiddig Oo Muhiim Ah Oo Uu Ka Tagay